အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ တရားမဝင် ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်တိုင်းမှာ ပုန်း၍တစ်မျိုး ကွယ်၍တစ်သွယ် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တစ်ကဏ္ဍ သိသိသာသာ တစ်ခါ မသိမသာတစ်လှည့် ရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ငြားလည်းပဲ အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ နိုင်ငံသိ ကမ္ဘာသိ ပွက်ပွက်ညံအောင် ပေါများခဲ့တာကတော့ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ကနေ လက်ရှိ ၂ဝ၁၉ အထိ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်းမှာ ပိုလို့ပင် ကမ္ဘာသိပေါများစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းက အစိုးရစီမံချက်တွေနဲ့ ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ ကျောက်တံတား မြို့နယ် ဘားလမ်းအနီးတစ်ဝိ...
IN: Life BY: အမ္ဗနဒီကျော်စွာ 22 Mar, 2019
ယခုနှစ်အတွက် မန္တလေးသင်္ကြန်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် သံချပ်အဖွဲ့များသည် မြို့တော်မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်(ဗဟို)၌ ဖျော်ဖြေခွင့်မပေးတော့ဘဲ မနောရမ္မံကွင်းရှိ ပြည်ထောင်စုသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွင်သာ ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဆိုသော ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ်ကို မန္တလေးစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ယမန်သတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် မန္တလေးပြည်သူများ၊ သင်္ကြန်ချစ်သူများ၊ သံချပ်အဖွဲ့များကြားတွင် ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိလာခဲ့သည်။ ...
IN: Editorial BY: အယ်ဒီတာ 22 Mar, 2019
IN: Business BY: KTS 22 Mar, 2019
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၈ ဦးကို ထိုင်းဘက်မှမြန်မာဘက်သို့ လာရောက်လွှဲပြောင်း
IN: Others BY: KKTM (MWD) 22 Mar, 2019
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့၌ ဒေသခံပြည်သူ ၂ဝဝဝ ခန့်ထောက်ခံ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
IN: Regional BY: ZZ 22 Mar, 2019
အဖြူရောင်နယ်မြေ ရခိုင်တွင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ခြေချရန် ကြိုးစားခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ် ဟုဆို
IN: Political BY: MP-HWA 22 Mar, 2019
ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကို နှစ်ရှည်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဟု သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရ ဆို
IN: Political BY: HWA 22 Mar, 2019
နှစ်ဖက် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ မကြာခဏပြုလုပ်သွားရန် NRPC နှင့် NCA မထိုးထားသော လက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ သဘောတူ
လွှတ်တော်တွင်း ပွတ်တိုက်မှုကနေ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တုကိစ္စ ငါးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း အဖြေမထွက်ခဲ့၍ အားရကျေနပ်မှု မရှိဟုဆို
ခြေဥပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု အခန်း(၄)အထိ ပြီးစီး ၊ ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှ ဆွေးနွေးမှု ပြန်စမည်
စစ်ကိုင်း၊ မတ် ၂၁ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်၊ စစ်ကိုင်း မြို့မဟာသုဗောဓာရုံကျောင်း တိုက်ကြီးများ၏ နာယကပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ သက်တော်(၇၉) နှစ်ပြည့်...
IN: Regional BY: DW 22 Mar, 2019
IN: Business BY: DW 22 Mar, 2019
IN: Business BY: MOS 22 Mar, 2019
ကာစီနိုများကို နယ်စပ်မြို့များ၌ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အင်အားတစ်ခုဖြစ်လာမည် ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ မတ်၂၁ အာရှယူ-၂၃ ခြေစစ်ပွဲ၊ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအောင် မြင်မှုရဖို့သာ အသင်း၏အဓိက ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး ဒုတိယဖြင့် ခြေစစ်ပွဲအောင် ရန်မှေ...
IN: Sport BY: NTL 22 Mar, 2019
လက်မှတ်များ ပြန်ရောင်းချကာ ဆာရီကို ဆန္ဒပြရန် ချဲလ်ဆီးပရိသတ်များ စီစဉ်နေ
ပရီးမီးယားလိဂ် ဇာတ်သိမ်းခန်းကို လှမ်းမျှော်ကြည့်ခြင်း
IN: World News BY: M Bwe 22 Mar, 2019
ဗလီနှစ်ခု အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွင် မိမိ၏လုပ်ပိုင်ခွင့် အစွမ်းကုန်အသုံးပြုကာဆောင်ရွက်မည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် ပြော
ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကို ပစ်သတ်ခဲ့သူက ၎င်း၏လက်ဖဝါးတွင် သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်၏ စကားများကို ရေးထိုးကာ တရားရုံး၌ အစစ်ခံ
အီးယူနိုင်ငံများတွင် ဆယ်စုနှစ်ဝက်အတွင်း ကင်ဆာရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ထက်ဝက်ကျဆင်းသွားဟု လေ့လာရေးကဆို
IN: Entertainment BY: ထက်ထက်အောင် 22 Mar, 2019
IN: Articles BY: YMG 18 Dec, 2018
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ တရားမဝင် ပြည့်တန်ဆာခန်းတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်တိုင်းမှာ ပုန်း၍တစ...
တနင်္သာရီ၊ မတ် ၂၁ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီမြို့နယ် တွင် မီးကြွင်းမီးကျန်မှတစ်ဆင့် တစ်ရက်တည်း မီး...
IN: Life BY: MM/MTH 22 Mar, 2019
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၁ အွန်လိုင်းပေါ်မှ တရားမဝင် ရောင်းချနေသည့် အရည်အသွေးမမီ သော ဆေးဝါးများ၊ ဆေးဝါးတုမျာြးေ...
IN: Life BY: TTHL 22 Mar, 2019
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၁ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညောင်ရွာတွင် ယခုလအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအိမ်...
IN: Life BY: WYHW 22 Mar, 2019
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂ဝ ထိုင်းအစိုးရထံ ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန် ပျက်ကွက် သည့် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားအလုပ်သမား ၈...
IN: Life BY: KSK 21 Mar, 2019
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂ဝ ကြည့်မြင်တိုင်စံပြငါးဈေးအတွင်း ငါးတောင်းဌာနခွဲမှ တရားဝင်ကုန်တင်၊ ကုန်ချအလုပ်သမားမ...
IN: Life BY: WYHW 21 Mar, 2019
တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အဖြေလွှာများကို စစ်ဆေးမည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် မိမိစစ်ဆေးမည့် ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားသူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက် တင်ပြရမည်
IN: Others BY: ATK 22 Mar, 2019
လှိုင်သာယာ နဝဒေးအိမ်ရာတွင် နိုင်ငံခြားသား ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမွေးထားသည့် ဝက်ဝံနှစ်ကောင်တွေ့ရှိ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာသို့ ပြန်လွှတ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ စီစဉ်
IN: Others BY: TS(HTY) 22 Mar, 2019
ဆေးဝါးမျိုးစုံကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အိမ်အရောက်မှာယူနိုင်သည့် စနစ်သစ် Dr. Doe မှ ဝန်ဆောင်မှုပေး
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
ထိုင်း-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးစင်္ကြံများကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာမည်ဟု အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဆို